IWEF phansi kwefu elimnyama kulokhu – Bayede News
UMA kuya ngezingqungquthela zamazwe afika akhangise
by Bayede-News Posted on 6 September 2019 13 September 2019
Omunye wezuthunywa ebuza kule ngqungquthela
UMA kuya ngezingqungquthela zamazwe afika akhangise kuzo iNingizimu Afrika njengesizinda esimqoka ekulondolozeni nasekutshaleni izimali lingagcina lifezekile iphupho likaMengameli uCyril Ramaphosa lokuqongelela imali eyevile ezigidigidini ezili-100.
Selokhu engene esikhundleni ngoNhlolanja wezi-2018 into ephambili kuyena ukukhulisa umnotho wezwe nokukhangisa elakuleli njengezwe elikhululekile abatshalizimali abangalondoloza kulo.Izigameko eziqhubekayo zokuhlaselwa kwezitolo zabokufika eGoli nokucekelwa phansi kwempahla kubonakala zingenawo umthelela emnothweni wakuleli njengoba irandi libuyelwe ngamandla uma liqhathaniswa nedola.
Ngeledlule uMengameli ubehambele umhlangano wamazwe angomacaphunakusale iG7 okuyiJapan, i-United Kingdom, i-United States of America (USA), iCanada, iFrance, i-Italy neGermany obubanjelwe eBiarritz, eFrance. Usuke lapho wadlulela eJapan emhlanganweni iSeventh Tokyo International Conference on African Development Summit lapho bekugxilwe khona emnothweni nakungqalasizinda yase-Afrika.
Kulokhu uRamaphosa uthole ithuba lokukhangisa izwe esekhaya njengoba kubanjwe iingqungquthela i28th World Economic Forum on Africa esongwa namuhla eKapa. Isiqubulo sale ngqungquthela sithi: “Shaping Inclusive Growth and Shared Futures in the Fourth Industrial Revolution”.
Nakuba iqhubeka le ngqunquthela kodwa ibanjwe ngaphansi kwefu elimnyama njengoba amazwe ememezele ngomzuzu wokugcina ukuthi ayahoxa ebeka izizathu zokuhlaselwa kwabantu bawo abakuleli. IPhini likaMengameli waseNigeria uMnu uYemi Osinbajo bekulindeleke ukuthi ahole umhlangano wayizolo obukhuluma ngokuthi ezamandla zingatholakala kanjani ngendlela elula e-Afrika.
UMengameli waseRwanda uMnu uPaul Kagame nozakwabo waseMalawi uMnu uPeter Mutharika nabo bawudubile lo mhlangano. NgoLwesithathu kube nezithangami ezehlukene esinye sazo okube ngesihlanganisa izikhulu zezinkampani ezinkulu lapho bezikhuluma ngokuthi zilibona kanjani ikusasa lezwekazi i-Afrika. UNkk uShirley Machaba oyisikhulu esiphezulu kwaPWC eSouthern Africa uthi kunokungazinzi kwenqubomgomo ekulandeleleni izinto.
Uthe kunesidingo sokuba kubanjiswane ekukhuliseni umnotho ngoba uma kungenjalo lokho kungaba nomthelela ku-4th Industrial Revolution (4IR). Abesifazane basemazweni ahlukene basebenzise lo mhlangano ukudlulisa umyalezo kubaholi bamazwe ngokubaluleka kokuvikelwa kwabesifazane nezingane ezwenikazi.
Ekhuluma kule ngqungquthela uNkk uNamhla Mniki-Mangaliso we-African Monitor, uthe kumele kube nezixazululo kulolu daba ngokuthi kube nezinkampani zobuchwepheshe okuzosetshenziswana nazo ukuze abesifazane bakwazi ukubika ngokushesha uma kukhona okubahlukumezayo.
“Sidinga ukubuza umbuzo wokuthi yini esingayenza uma sithola ithuba elibaluleke kangaka njengaleli lokukhuluma kuWorld Economic Forum. Kimina okungifikela kuqala ukuthi sinabaholi abaqavavile futhi abanamandla abahambele le ngqunquthela. Kungani bengahlangani basho ngazwi linye ukuthi le nkinga sidinga ukuyisukumela ngokushesha. Kunezinkampani zezobuchwepheshe ezilapha, osomabhizinisi ezingasiza,” kusho uNkk uMniki-Mangaliso.
AbaseKapa bathemba ukuthi ukubanjwa kwale ngqungquthelela kuleli dolobha kuzokwenza umehluko omkhulu emnothweni wedolobha nesifundazwe. Idolobha libheke ukuthi abatshalizimali bazoshiya imali engafinyelela ezigidini ezili-R19 emnothweni wedolobha.
Ilungu leSigungu Esiphezulu kwezomnotho kuMasipala uMnu uJames Vos, uthi ngendlela abuka ngayo izinto njengoba kunezithunywa eziyi-1000 ezihambele le ngqungquthela kuzodaleka amathuba emisebenzi kufukule nomnotho wedolobha.
Khonamanjalo iWesgro, okuyinkampani egqugquzela ezokuvakasha, ezohwebo nokutshala izimali kuleli dolobha nasesifundazweni iWestern Cape ithi ingqungquthela ingebalulekile eKapa futhi izosiza ezinhlelweni zabo ezizokapakela naseNingizimu Afrika yonke.
ISikhulu Esiphezulu sakwaWesgro uMnu uTim Harris uthe:
“Le ngqungquthela izofukula umnotho waseKapa ngezindlela ezimbili abale kukho ukusebenzisa imali kwezithunywa ngezikhathi zilapha nokunyusa iKapa njengendawo ekahle yokulondoloza ezwenikazi i-Afrika. Ibaluleke kakhulu kithina njengoba amehlo ethe njo eKapa.”